Toetr'andro any Thailand ~ Journey-Assist - Weather in Thailand mandritra ny volana maro
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy
Ny toetrandro any Thailandy. Fotoana, Weather.
Pejy natokana ho an'ny faritra, tanàna sy trano fandraisam-bahiny Thailand, ny endri-javatra amin'ny vanim-potoana klimaika dia mihatra manokana amin'izy ireo, ary amin'ity pejy ity isika dia miresaka momba ny olan'ny toetr'andro ankapobeny ao Thailand.
Ny toetrandro any Thailand
Ny toetr'andro any amin'ny faritr'i Thailand
Ny mari-pana ny rano
Vanim-potoana any Thailandy
Ny orana any Thailand
Ao amin'ny zoro havanana havanana dia misy bokotra iray hidirana ny menio amin'ny fisafidianana ny sosona aseho (rivotra, kotrokorana, orana, rahona, onja, tsindry atmosfera ... ary zavatra maro hafa ilaina). Raha tsorina, voafantina ny takelaka misy ny mari-pana.
Vaovao fampiharana mahafinaritra avy amin'ny Windy.comizay fiasa azonao jerena ao amin'ny Widget amin'ity pejy ity. Azo alaina amin'ny rohy - iOS и Android
Latabatra vanim-potoana tany Thailand
Ny hafanana isam-bolana any Thailand
Thailand dia firenena amin'ny fahavaratra mandrakizay !. Ao amin'ny faritra tropikaly ny faritany manontolo izay asongadin'ny fiovan'ny rivotra. Eto, ny tsenan'ny varotra izay manjaka amin'ny ririnina dia soloina monsoon amin'ny fahavaratra. Misy fiantraikany amin'ny fizaran-taona. Tsapa kely ny ririnina, ny toetrandro any afovoany sy avaratra atsinanan'ny firenena dia azo zaraina ho vanim-potoana telo, ary any atsimo, raha mandray an-tsaina ny habetsahan'ny rotsakorana, roa. Ny fizarana fiara dia zaraina mitovy manerana an'i Thailand, afa-tsy amin'ny fotoanan'ny orana, izay miseho any amin'ny faritra climatic samy hafa amin'ny fotoana hafa kely (saingy voafaritra mazava tsara). Ity vanim-potoana ity dia aseho amin'ny fiakaran'ny mari-pana.
Ny toetrandro any Thailandy manontolo dia azo heverina ho hamandoana mafana sy subequatorial. Ny firenena dia manana fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny faritany atsimo atsinanana. Ny antony mahatonga izany dia ny haben'ny faritany.
Ilay monsoon, izay avy any atsimoandrefana dia mitondra hatsiaka sy orana any Thailandona nanomboka ny volana Mey ka hatramin'ny tapaky ny volana Jolay. Tamin'ny volana Novambra, nifarana ny orana, manomboka ny fotoanan'ny orana sy ny hatsiaka, maharitra hatramin'ny tapaky ny volana febroary. Ny fe-potoana manomboka amin'ny volana Novambra ary mifarana amin'ny volana febroary dia ny vanim-potoana "velvet" any Thailand. Aseho amin'ny toetrandro maina sy sultry. Tao anatin'ny vanim-potoana ny volana febambra ka hatramin'ny Mey, nanomboka ny hafanana mahery, lasa mafana ny rivotra, avy eo ny vanim-potoana monsoon. Avy eo dia miverimberina ihany ilay tsingerina.
Ny mari-pana isan-taona eo amin'ny faritra samy hafa dia miovaova amin'ny karazany maro - manomboka amin'ny +18 ka hatramin'ny +34. Akaikin'ny havoana sy eo amorontsiraka dia ambany. 1500 mm ny firotsahana isan-taona any Thailand. Amin'ny fahavaratra, 75 isan-jato ny hamandoana (miaraka amin'ny mari-pana sela amin'ny +34), amin'ny fotoanan'ny orana, ny 87 ny halalin'ny hamandoana (amin'ny mari-pana ny +29), ary ny hamandoana ambany sy isotherm amin'ny +20 dia mahazatra amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina.
Ity lohahevitra ity dia ambara amin'ny antsipirihany amin'ny toetrandro mandritra ny volana maromaro, izay manondro ny mari-pana, ny hamandoana ary ny toetra hafa, azo ampiharina amin'ny faritra samihafa any Thailand.
Eny ary, amin'ny ankapobeny, dia ny toe-javatra toy izao:
Miovaova ny toetrandro amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena, satria somary miakatra tsara i Thailand ary nosasa ny ranomasina roa.
Ao afovoan-tanànan'i Thailand (izay ahitana tanàna toa an'i Bangkok, Pattaya, Samet, Cho Kang, Ayutthaya ary Hua Hin no misy), ririnina ny volana novambra-martsa, fahavaratra amin'ny martsa-Mey, ary manomboka ny volana jona ka hatramin'ny Oktobra.
Any amin'ny faritra atsimon'ny firenena, nosasan'ny Ranomasina Andaman (ireo nosy Phuket, Lanta, Phi Phi, faritanin'i Krabi), misy vanim-potoana 2 - fahavaratra miaraka amin'ny toetrandro malefaka (manomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny aprily) ary ny vanim-potoana (manomboka amin'ny volana Mey ka hatramin'ny Oktobra).
Any amin'ny faritra atsimon'i Thailand, voasasa amin'ny Ranomasina Chine Atsimo (Nosy Samui), misy vanim-potoana 2 "avo": ny volana Jolay ka hatramin'ny Aogositra ary ny volana Desambra ka hatramin'ny Febroary.
Any amin'ny faritra avaratra amin'ny firenena (ny tanànan'i Chiang Mai, Sukhothai, Chiang Rai), ny ririnina dia manomboka amin'ny volana Oktobra ka hatramin'ny martsa, ary manomboka ny volana jolay ka hatramin'ny septambra dia mitohy ny orana.
Ny mari-pana any Thailand
Ny mari-pana mandritra ny taona dia tena mahazo aina sy mahafinaritra ho an'ireo tia ny fialantsasatra amoron-dranomasina, ary eo amin'ny 26-30 degre Celsius! Ny fihenam-bidy dia toa ny mari-pana avo indrindra amin'ny Mey-Jolay, ary ny ambany indrindra amin'ny volana Janoary.
Jereo eto ambany raha mila antsipirihany hoe aiza ny toetr'andro. Isaky ny isam-bolana dia hosoratana ny mari-pana ao amin'ny faritra tsirairay any Thailand!
Amin'ny ankapobeny, ny toetrandro amin'ity firenena ity dia be tropika. Ao amin'ny ankamaroan'ny faritany dia misy fizarana 3:
Ny ririnina (volana novambra ka hatramin'ny aprily) - miaraka amin'ny toetrandro milamina indrindra, izay mifamatotra indrindra amin'ny orana somary kely. Saika manjaka eran'ny firenena ny toetr'andro malefaka; Ny hafanana amin'ny andro dia indrindra + 25 ... + 29, ary ny hafanana amin'ny alina dia ankapobeny + 20 ... + 22.
Ny fahavaratra (jona ka hatramin'ny septambra) - asongadin'ny hafanana amin'ny andro indrindra ao amin'ny laharana + 30 ... + 34 ary ny orana matetika. Na izany aza, matetika ny orana dia tropikaly, noho izany dia vetivety izy ireo (tsy mihoatra ny roa ora) ary efa adiny iray aorian'ny fiafaran'ny orana dia tsy misy fampahatsiahivana akory, ny masoandro dia mamiratra indray.
Ny vanim-potoana faran'ny vanim-potoana (manomboka ny Mey ka hatramin'ny Oktobra) dia mampitombo ny isan'ny orana, fa mijanona tropikaly, fohy, na dia mitranga matetika aza izy ireo.
Sarintany an-tany Thailand
Ny orana mafana indrindra ao amin'ny firenena dia mitranga amin'ny faritra afovoany sy any atsinanana akaikin'ny ranomasina amin'ny volana Aogositra sy Septambra. Oktobra no volana farany amin'ny fotoanan'ny orana. Saingy tsy mety ny mieritreritra fa tsy mety amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina any Thailand io vanim-potoana io. Ny orana amin'izao fotoana izao dia maharitra 30 minitra isan'andro ary misy ny fisehoan'ny orana mafana. Avy eo, ny lanitra dia mihaona sy milamina ny toetrandro, ny masoandro dia mihamiratra moramora ary ny rivotra manidina mifaly.
Rindran'ny rivotra isam-bolana any Thailand
Ny fitsipika izay manakaiky ny fihenan'ny mari-pandrefesana amin'ny marika ho lasa kely kokoa dia mifandraika amin'i Thailand koa. Amin'ny volana mangatsiaka indrindra, ny isotherms eo akaikin'ny ekoatera dia eo anelanelan'ny 20 + 27 ... + 0, raha toa kosa ny fihenan'ny tendrombohitra any an-tampon-tanety ... ... 25. Ohatra, maraina maraina any Chiang Mai dia mety ho +10, any amin'ny faritra hafa any Thailand - mihoatra ny +20. Ny mari-pana eo amin'ny maripana dia matetika amin'ny volana aprily sy Mey - mihoatra ny +35, nefa indraindray mahatratra +40 izany.
Ao amin'ny faritry ny saikinosy Malacca, ary koa amin'ireo nosy amoron-dranomasina maro any Thailand, saika ny taona dia misy isotherms ireo eo anelanelan'ny + 26 ... + 29 (amin'ny ririnina amin'ny alina dia mety mihena ny mari-pana amin'ny 22, raha ny volana aprily kosa mandritra ny andro dia mitombo hatramin'ny + 34 ... + 38). Ny orana lehibe indrindra amin'ny volana Mey, septambra ary Oktobra, na dia amin'ny volana ririnina aza, mbola mafana kokoa noho ny any amin'ny faritra avaratry ny firenena. Ny toetra mampiavaka an'ireo faritra ireo dia ny orana matetika amin'ny alina, ary matetika izy ireo dia fohy, na dia tena be dia be - indraindray ny rano be mivoaka ao anatin'ny 1-1,5 ora rehefa milatsaka amin'ny afovoan'i Eurasian afovoany ao anatin'ny iray volana.